ကုန်ကြမ်း Orlistat အမှုန့် (96829-58-2) hplc≥98% ထုတ်လုပ်သူ & စက်ရုံ
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Orlistat အမှုန့်
SKU: 96829-58-2. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, Orlistat မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (96829-58-2) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Orlistat အမှုန့် lipstatin ၏ပြည့်ဆင်းသက်လာခြင်း, ဘက်တီးရီးယား Streptomyces toxytricini ကနေခွဲထုတ်ပန်ကရိယ lipases တစ်အစွမ်းထက်သဘာဝအ inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ Orlistat အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်း၏ဆွေမျိုးရိုးရှင်းတစ်ခုတည်ငြိမ်မှုကြောင့်, orlistat anti-အဝလွန်ခြင်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် lipstatin ကျော်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အမည်: Orlistat အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ထက်ဝက်ကျော်သည်ကမ္ဘာ့လူဦးရေအစဉ်အဆက်, ခွဲစိတ်, ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးလေ့ကျင့်ခန်း, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကြိုးစားခဲ့သိရသည်။ ဤအကိုယ်အလေးချိန်ကုစားအားလုံးသင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်သစ္စာပါပဲနှင့်အဆုံးစွန်သောရန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာမှသာလျှင်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ခွဲစိတ်သို့မဟုတ်ဆေးဘို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုသင်အများဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမယူကြဘူးသည့်အခါထိခိုက်စေခြင်းငှါထွက်လှည့်လိမ့်မည်။
Orlistat (3-D ကိုခွေး) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
Orlistat (2-D ကိုခွေး) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
အဆိုပါ Orlistat ၏ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
သတ်မှတ် Atom Stereocenter အရေအတွက် 4
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 35
XLogP3-AA ကို 10
အတိအကျ Mass 495.392 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 81.7 တစ် ^ 2
Rotate ဘွန်းအရေအတွက် 23
မော်လီကျူးအလေးချိန် 495.745 g / mol
မှတစ်ခုဖြစ်သော ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးဝါးများ သငျသညျအထိရောက်ဆုံးအလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့ရှာပုံတော်အတွက်ဖြတ်ပြီးလာပါတယ် Orlistat ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုရွေးမယ့်လျှင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဒီ Orlistat ပြန်လည်သုံးသပ်ခုနှစ်, သငျသညျ, ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, ကကဘာလဲဆိုတာအပါအဝင်အရေးပါသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ, ဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်ပါလိမ့်မယ်။
ကုန်သွယ်ရေးနာမကိုအမှီ Xenical အောက်မှာညွှန်းဆေးဝါးအဖြစ်ရောင်းချခဲ့သော Orlistat, ထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်းအဖြစ်ဆိုးရွားသောအလေးချိန်ကိစ္စများအဖြစ်ကတခြားအလေးချိန်-related အခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ရေးဆွဲမယ့်တစ်ဦးဆေးညွှန်းကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မဟာမိတ်များကိုခေါ် over-the-counter ဦးမူးယစ်ဆေးအဖြစ် GlaxoSmithKline ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Orlistat ရဲ့ယေဘုယျဖော်မြူလာအများအပြားနိုင်ငံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 2000 ကတည်းကကြောင့်သြစတြေးလျအတွက် S3 over-the-counter ဆေးဝါးအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ over-the-counter ဦးမူးယစ်ဆေးအဖြစ် Orlistat ၏ခွင့်ပြုချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အငြင်းပွားဖွယ်ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာထပ်တလဲလဲပြည်သူ့နိုင်ငံသားအဖြစ်လူသိများနေတဲ့စားသုံးသူစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုခိုင်ခိုင်လုံလုံအပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူကယ်လိုရီပမာဏကိုလျှော့ချအရှင်, အစားအစာကနေအဆီစုပ်ယူမှုကိုတားဆီးဆိုလိုတာကတစ် lipase inhibitor အဖြစ် Orlistat ရဲ့အပြုအမူ။ ရုံများစွာသောအခြားကိုယ်အလေးချိန်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ Orlistat ထိုကဲ့သို့သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာကဲ့သို့သောအခြားလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများဒီပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ကပ်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တပ်ရင်းသို့မူးယစ်ဆေးမပါဝင်ပါဘူးသောသူတို့ထက် ပို. နှစျခုမှသုံးကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရပ်ကဖော်ပြတယ်။
Orlistat ပတ်သက်. နှစ်လိုဖွယ်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာသင်ကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးသည်သာမကကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလိုသွေးဖိအားကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဒီအလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမူးယစ်ဆေးလူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲလုပျသောတူညီသောလမ်းအတွက်အဝလွန်နေသောလူအမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါစတင်ခြင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ယုံကြည်ကြသည်။
အကြောင်းကိုပျော်ရွှင်ဖြစ်အတော်ကြာ Orlistat အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်နေစဉ်, အာရုံစိုက်ဖို့အချို့သော Orlistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒီကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံး၏အများဆုံးမကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး steatorrhea ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆီပြန်, မြည်းကြိုးကိုဖြည်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာများ, ကံကောင်းတာ, အချိန်နှင့်အတူလျော့ကျသွားသည်။
လုပ်ဆောင်ချက် Orlistat ယန္တရား
Orlistat အားကောင်းတဲ့အူ Lipase တားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipases များအတွက် Reversible လုပ်တက်ကြွ-site ကို inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအရှင်၎င်းတို့၏အရေးယူဟန့်တားခြင်းနှင့် hydrolyzed နှင့်စုပ်ယူခံရခြင်းမှအစားအသောက်များတွင်ကနေအဆီတားဆီး, ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ် lipases အတွက်တက်ကြွစွာ serine ဆိုက်နှင့်တစ်ဦး covalent နှောင်ကြိုးဖြစ်ပေါ်လာသော။ (NCI04) ။
ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းများအတွက်, Orlistat triglyceride ဖြိုဖျက်သောအူထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအင်ဇိုင်းတွေနေသောပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ် lipases, နှေးအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဤအ lipases ပိတ်ဆို့သောအခါ, ကိုစုပ်ယူဖက်တီးအက်ဆစ်သို့သင့်ရဲ့အစားအစာကနေ triglyceride ၏ hydrolyzation တားဆီးနေသည်။
အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြားနှုတ် ယူ. တခါယူနေကြသည်; ဒေသခံ lipase တားစီးသည့် GI ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ မူးယစ်ဆေးကသာအလွန်သေးငယ်သောပမာဏမူးယစ်ဆေးအများစုမစင်မှတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်ခံနှင့်တကွ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူနေကြသည်။
မကြာမီကလေ့လာမှုများအန္တရာယ်ကင်ဆာဆဲလ်များ၏ဝါဒဖြန့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတစ်အင်ဇိုင်းဟန့်တားအတွက်အစွမ်းထက်ဖြစ် Orlistat တွေ့ပြီ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, (ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြား untargeted ဆဲလ်သို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကို bioavailability ၏တားစီးကဲ့သို့) မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုအသုံးဝင်သော antitumor အေးဂျင့်အဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုတားဆီး။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာသုတေသီက၎င်း၏ Off-ပစ်မှတ်အပါအဝင်မူးယစ်ဆေးသစ်ဆယ်လူလာပစ်မှတ်ရှာမယ့်ဓာတု proteomics ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ကိုယူ။
120 ၏ပုံမှန်ဆေးညွှန်းထိုးမှာအစားအစာများမတိုင်မီတစ်နေ့လျှင်3ကြိမ် mg, orlistat ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူခံရခြင်းမှအာဟာရအဆီ 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်ကာကွယ်ပေးသည်။ ပိုပြီးဆေးများကိုယူပြီးပိုပြီးအစွမ်းထက်သက်ရောက်မှုမပေးပါဘူး။
Orlistat တစ်ဦးအလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာအဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်နေသောလူများအတွက်တစ်ဦးစံပြရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ဒါကကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးအလေးချိန်-related ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူလူအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ဒါဟာလူတွေကိုပဲအလေးချိန်မဆုံးရှုံးကူညီရန်ကတိပြုပေမယ့်လည်းသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရထားသောအလေးချိန်ပြန်ရရှိမှုမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သူကသွေးတိုး, ဆီးချို, နှလုံးရောဂါ, နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်အခြားများစွာသောကျန်းမာရေးအန္တရာယ်၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။
Orlistat ယူပြီးပြီးနောက်ကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုလူတစ်ဦးမှအခြားမှကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ်နှစ် spanning လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကို run တဲ့သူသုတေသီများဘာသာရပ်များ၏ 35.5 အကြားရာခိုင်နှုန်းနှင့် 54.8 ရာခိုင်နှုန်းကအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရဒြပ်ထုသေချာပေါက်အဆီခဲ့တာတောင်မှတစ်5ရာခိုင်နှုန်းကခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ကျဆင်းခြင်းအောင်မြင်ရန်စီမံခန့်ခွဲထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်း 16.4% ကိုဘာသာရပ်များ၏ -24.8 ခန္ဓာကိုယ်အဆီအနည်းဆုံးတစ်ဦး 10 ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ကျအောင်မြင်ရန်စီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ Orlistat ယူပြီးရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါ, သူတို့ထဲကတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကသူတို့ဆုံးရှုံးဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့အလေးချိန်၏ရာခိုင်နှုန်းကို 35 မှတက်လာတယ်။
Orlistat, စိမ်း၏ပုံစံအတွက်လာမှုန့်လုံးလေးများဆံ့ကြောင်း Hard-gelatin တောင့နှင့် 120-မီလီဂရမ်အလေးချိန်။ အဆိုပါအကြံပြုနေ့စဉ်သောက်သုံးသောသုံးတောင့နေ့ဖြစ်၏။ သင်, မနက်စာဘို့တ, နေ့လည်စာဘို့တနှင့်ညစာစားဘို့တသွားလာရင်းမှာအားလုံးသုံးဆေးပြားယူပေမယ့်အစားအဆီပါဝင်သောအဓိကမုန့်ညက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတက်ဘလက်ယူ, ဆိုလိုသည်မှာသင့်ပါဘူး။ သငျသညျအစာစားပြီးနောက်တစ်န့်ညက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်တစ်နာရီအထိတစ်ဦးချင်းစီဆေးလုံးကိုယူနိုင်ပါတယ်။ အမှု၌အစာစားမကြာခဏလွဲချော်နေသည်, သို့မဟုတ်သင့်မုန့်ညက်အဆီဆံ့ပါဘူးလျှင်, Orlistat ထိုးချန်လှပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အကြံပြုထားတဲ့နေ့စဉ်သောက်သုံးသောအထက်တွင်ဆေးများမည်သည့်အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ရှိရကြပြီမဟုတ်။
ထိုကဲ့သို့သောအာဟာရမျှတသော, လျော့ချ-ကယ်လိုရီအစားအစာနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းမှကပ်ကဲ့သို့သောအခြားကိုယ်အလေးချိန်မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါ Orlistat ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဆီကနေအကြောင်းကို 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုကယ်လိုရီများတဲ့မုန့်ညက်နှင့်အတူကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးကိုယူရန်အကြံပြုပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများနေတဲ့ဆေးထိုးတာပြီးနောက်အဖြစ်မကြာမီ 24-48 နာရီအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။
Orlistat အချို့သောအဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်နှင့် beta-carotene များ၏စုပ်ယူမှုကိုအသေးအဖွဲအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, ဆေးလုံးကိုယူသူတွေကိုလုံလောက်သောအာဟာရကိုသေချာစေရန်အဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်ပါဝင်သော multi-ဗီတာမင်အတူယူရန်အကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာဗီတာမင်ဖြည့်စွက်မှာအနည်းဆုံးနှစ်နာရီမတိုင်မှီသို့မဟုတ် Orlistat ယူပြီးပြီးနောက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုအကြံပြုပါတယ်။
cyclosporine ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိသူတွေကိုလူနာတွေအတွက်အမျှသူတို့ကအနည်းဆုံး3နာရီ Orlistat ယူပြီးပြီးနောက် cyclosporine စီမံခန့်ခွဲရန်အကြံပြုပါသည်။ levothyroxine ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိသူတို့အဘို့, သူတို့ကအနည်းဆုံး4နာရီ Orlistat ယူပြီးပြီးနောက် levothyroxine ကုထုံးစီမံခန့်ခွဲရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ Orlistat နှင့် levothyroxine နှစ်ဦးစလုံးယူသူများသည်သိုင်းရွိုက် function ကိုပြောင်းလဲဘို့ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုလေ့လာရပါမည်။
ယခင်က orlistat တင်းကြပ်စွာဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများ၏ဆေးညွှန်းအောက်မှာယူခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် 2007 အတွက်, အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုလူတိုင်းအတွက်ကရရှိနိုင်ပါအောင်ဤအရပ်, Over-the-counter စျေးကွက်အတွက်ကြောင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးမီ, သင်ကြုံတွေ့ရစခွေငျးငှါမညျသညျ့ hypersensitivity တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ပြောပြရန်အကြံပြုလိုတယ်။ Orlistat ပြင်းထန်မတည့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှဦးဆောင်သင်အဆင်သင့်မဖြစ်ရသောအလုပ်မလုပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ, ပါဝင်သည်။ သူတို့ထဲကတချို့က cellulose, microcrystalline, gelatin, silica နှင့်ဆိုဒီယမ်ကစီဓါတ် glycolate ပါဝင်သည်။
သင်ရှိခြင်းစေခြင်းငှါမဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုရည်မှတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်နှင့်အတူမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ orlistat တိကျတဲ့မူမမှန်ခြင်းနှင့်ပြဿနာများ, အစာခြေနှင့်ဆက်စပ်အထူးသဖြင့်သူတို့အားအတွက် contraindicated ဖြစ်ပါတယ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Malabsorption syndrome ရောဂါ
ဒါက Git သည့်စနစ်တလျှောက်အစားအသောက်အာဟာရမလုံလောက်စုပ်ယူဘို့တာဝန်ရှိတစ်ဦးမူမမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုယျတိုငျကအတွက် orlistat ဆီ၏အစာခြေဟန့်တားသဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်သတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤမူးယစ်ဆေးကြာသူမည်သူမဆိုကိုပိုမိုကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်မည်, သေးသောသူတို့ malabsorption syndrome ရောဂါခံစားနေကြရသည်။
ဒါဟာအသည်းမှသည်းခြေရည်စီးဆင်းမှု၏တားစီးရှိတယ်ထားတဲ့အတွက်အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများရှိပါတယ် အစီရင်ခံစာများ အရာကြောင့်ရှားပါးကိစ္စများတွင်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသောက်သုံးသောအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်းစူးရှသောအသည်းဒဏ်ရာ orlistat လင့်ထားသည်။
ဤသည် cholecystectomy နှင့်ဆက်စပ်နေသော syndrome ပါဝင်သည်။
သင်သည်သင်၏ဆေးဝါးမှဖော်ပြသင့်ပါတယ်အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများတွင် HIV ကူးစက်မှု, သိုင်းရွိုက်ရောဂါ, ကျောက်ကပ်ကျောက်, သိမ်းယူမှု, ဒါမှမဟုတ်ပန်ကရိယတို့ပါဝင်သည်။ သိမ်းယူမှုသို့မဟုတ်တက်ခြင်းမှာတော့ orlistat စုပ်ယူမှုကိုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအားဖြင့် antiepileptic ကုသမှု unbalancing တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုအပုံမမှန်အချို့သည် bulimia နှင့် anorexia ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သင်အဝလွန်နေကြသည်မဟုတ်လျှင် orlistat ယူရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်။
ဒါဟာသင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဖိနှိပ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အဆိုအခြားဆေးဝါးများပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်အကြောင်းကြားပညာရှိပါပဲ။ မူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး interaction ကသူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုတခုတခုအပေါ်မှာတိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားအကျိုးသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်သည် pharmacokinetics နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ, orlistat အမြဲတစ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအစားထိုးကုသမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ယန္တရားနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျ cyclosporine အပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်ဖြစ်ကောင်း orlistat ရှောင်ရှားရန်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်ဆဲတင်းကျပ်သောညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူသာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံဘက်မှာဖြစ်စေရန်, သငျသညျနှစျနာရီအကြာကအနည်းဆုံးနှစ်နာရီဒီအလေးချိန်-စီမံခန့်ခွဲမှုမူးယစ်ဆေးရှေ့မှာယူသို့မဟုတ်သင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင်သင်ယူစေခြင်းငှါအပေါငျးတို့သဆေးညွှန်းများနှင့် Non-ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, အစားအစာဖြည့်စွက်, ဗီတာမင်, anticoagulants, ဒါမှမဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်ဖော်ပြရမည်။
ဤသည်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဆေးဝါးကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့စီစဉ်မည်သူမဆို, ဒါမှမဟုတ်နို့တိုက်မိခင်တွေလည်းမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးမဆိုကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပြီးသန္ဓေသားထိခိုက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
က orlistat မိခင်ရဲ့သားမြတ်မှဖြတ်သန်းရှိမရှိ, သငျသညျအစားကရှောင်ရှားချင်ပါတယ်နှင့်စိတ်မကောင်းခြင်းထက်, လုံခြုံဟုခံစားရသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပေမယ့်။
Orlistat ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတိုးတက်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်သောအသွေးကိုသကြားနဲ့ဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်မယ်လို့အရာဖြစ်တယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သင်မှန်မှန်သကြားအဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆရာဝန်မှမကြာခဏလည်ပတ်မှုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ယူနိုင်ရန်ဆီးချိုရောဂါဆေး, လက်ျာအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုထိန်းညှိဖို့လာသောအခါဒါလုပ်နေသငျသညျကိုသိရန်ကူညီပေးသည်။
ကိုယ့်အရှိဆုံးကုသမှုကဲ့သို့ orlistat က၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ အဆိုပါမူလတန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမြဲအူသိမ်အူအလေ့အထအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ သို့သော်ဤသာကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်တာ၏ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
တချို့လူတွေရန်, ရောဂါလက္ခဏာတွေအခြားသူများအနေဖြင့်အရှိန်ကိုငြိမ်းစေခြင်းငှါ, က orlistat ယူပြီးတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်မှာ, ကသင့်ရဲ့ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်ပညာရှိဖြစ်၏။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလျှော့ချရန်အဘို့အသင်တစ်ဦးအနိမ့်အဆီအစားအသောက်များတွင်များမှာပိုမိုကိုက်ညီသည်ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းသော်လည်း steatorrhea ဟာမစင်အတွက်ရေနံနှင့်ပိုလျှံဆီ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ orlistat lipases ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကတည်းကအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်မျှမစုပ်ယူရှိရလိမ့်မည်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါမစင်အဆီပြန်နဲ့အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီသက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်, တဦးတည်းကယ်လိုရီများနှင့်မြင့်မားသောအဆီအဆင့်ဆင့်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ FDA ကစံချိန်စံညွှန်းများအရ, ပမာဏကို 0.53 အောင်စအတွင်းတွင်သာဖြစ်နှင့် 30% ထက်မကျော်လွန်သင့်ပါတယ်။
Fecal incontinence ဝမ်း
ဤသည်ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား II ကိုသူတစ်ဦးချင်းစီအကြားဘုံဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့သောအမှုများကိုရှားပါးပေမယ်အချို့ကိုသင်နောက်ခံအသည်းပြဿနာများရှိသည်သည့်အခါပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်သင်အမြင့်မားသောက်သုံးသောယူပါ။ 2010 ခုနှစ်တွင် FDA ကတစ်ဦးပါဝင်သည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသတိပေး ဖြစ်နိုင်သမျှအသည်းဒဏ်ရာများ၏အန္တရာယ်ကိုညွှန်ပြပေးသော orlistat တံဆိပ်များ, ပေါ်မှာ။
သို့သော်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေဆဲအခြားကြောင်းစဉ်းစားနေတဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်ပါသည် ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု ဗြိတိသျှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမဟုတ်ရင်ညွှန်ပြ။
အသည်းရောဂါ၏သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များအချို့သည်အန်, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု, အဝါရောင်အသားအရေနှင့်မှောင်မိုက်ဆီးပါဝင်သည်။
ဒါဟာ orlistat ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးကိုယူပြီးသည့်အခါမဆို hypersensitivity သို့မဟုတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အလွန်ရှားပါးသည်။ တချို့လူတွေရန်, မူးယစ်ဆေးမှာတွေ့ရတဲ့မလှုပ်မရှားပါဝင်ပစ္စည်းများပျို့, ယားယံခြင်း, အဖု, ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း, အခက်အခဲအသက်ရှူခြင်း, ဒါမှမဟုတ်မူးဝြေခင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အခွားသောလျော့နည်းဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ဖောင်း, rectal အီ, မောပန်းခြင်း, အနိမ့်အစာစားချင်စိတ်များနှင့် gallstones ပါဝင်သည်။ သငျသညျစူးရှသောရောဂါလက္ခဏာကိုခံစားလျှင်, သင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားဒါမှမဟုတ်ရန်သတင်းပို့ပါသင့်တယ် FDA ကအစီရင်ခံအစီအစဉ်.
orlistat အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်သော်လည်းနှစ်ပတ်အတွင်းရလဒ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကနေအကျိုးအမြတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်, ညွှန်ကြားချက်အောက်ပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနားလည်ခြင်း, သင်၏အစားအစာအပေါ်စစ်ဆေးနေသည်။
သငျသညျ orlistat ယူသကဲ့သို့, လက်ျာအာဟာရပရိုဂရမျကိုလိုကျနာဖို့အရေးကြီးတယ်, မှန်မှန်လျော့နည်းဆီဥ, အနိမ့်ကယ်လိုရီများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုစားသုံးကြသည်။ တစ်ဦးကသင့်လျော်သောအစားအစာကိုပိုမိုအသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အစေ့များပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ ထို့အပြင်သငျသညျ orlistat လုပ်ကွက်အဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်ဓာတ်စုပ်ယူမှုကိုကတည်းကမရှိမဖြစ် multivitamin ထုတ်ကုန်နှင့်သင်၏အစားအစာဖြည့်စွက်သင့်တယ်။
သငျသညျသံသယရောက်နေတဲ့အခါ, သငျသညျနောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်အဘို့သင့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များများအတွက်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်စာရင်းဝင်ကြပြီမဟုတ်သည့်အသက်အန္တရာယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, အစီရင်ခံနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဝယ်ခြင်းငှါ Orlistat အမှုန့် (96829-58-2) AASraw ထံမှ
AASraw ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Orlistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
သငျသညျအဆီဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Orlistat အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းရပါမည်အရာအားလုံးကို
ကိုယ်အလေးချိန်-တစ်ဦးကိုသင်သိသင့်အံ့သြဖွယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုမူးယစ်ဆေးများအတွက်သဘာဝအရင်းအမြစ် Orlistat အမှုန့် !!!
Zhi J ကို, Melia ကို AT, Eggers H ကို, Jolie R ကို, Patel က ih (1995) ။ "ကျန်းမာတဲ့လူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် orlistat ၏ကန့်သတ်စနစ်တကျစုပ်ယူ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, တစ်ဦး lipase inhibitor," ။ J ကို Clin Pharmacol ။ 35 (11): 1103-8
Garcia က SB, Barros LT, Turatti တစ်ဦးက, et al ။ Anti-အဝလွန်ခြင်းအေးဂျင့် Orlistat ဓာတုသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်နဲ့ကုသကြွက်များတွင်အူမကြီး preneoplastic အမှတ်အသားများအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကင်ဆာလက်တ။ 2006; 240: 221-4 ။
FDA ကမဟာမိတ်များ (orlistat 60 တောင့ mg) over-the-ကောင်တာ "(PDF ဖိုင်) (သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း) ။ PRNewswire ။7ဖေဖော်ဝါရီလ 2007
Mittendorfer B, Ostlund RE, Jr ကပက် BW, et al ။ Orlistat အစားအသောက်လက်စထရောစုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်း Res ။ 2001; 9: 599-604
ဖုန်ကြားရှင်-ယုယန်; Kai, လျူ; Mun အဟောင်ကောင်, Ngai; J.Lear မာတင်; R.Wenk, Markus; S.Qin, Yao အဘိဓါန် (2010) ။ "Orlistat-anti-အကျိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ FDA က-approved မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလားအလာဆယ်လူလာပစ်မှတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်-based proteome ကို" ။ အမေရိကန်ဓာတု Society ၏ဂျာနယ်။ 132 (2): 656-66 ။